အရိုးပန်းပု (Bone Sculpture) – MYANHOUSE
အရိုးပန်းပု (Bone Sculpture)
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Myanhouse ရဲ့ လက်မှုချစ်သူများကို အရိုးပေါ်မှာ ထွင်းထားတဲ့ အရိုးပန်းပု လက်ရာတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အရိုးပန်းပုဟာ မာကျောတဲ့ အရိုးပေါ်မှာ ပျော့ပြောင်းပြီး အနုစိပ်တဲ့ လက်ရာတွေရရှိအောင် ထွင်းထုရတဲ့အပြင် ရရှိလာတဲ့ အရိုးရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အနေအထားပေါ်မှာလိုက်ပြီး အချိုးကျနအောင်လည်း ထွင်းယူရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanhouse မှာ ဒီလို လက်ရာမြောက်ပြီး မြန်မာမှုပုံစံစုံလင်တဲ့ အရိုးပန်းပုမျိုးစုံ အပါအ၀င် စစ်တုရင်ခုံတွေပါ ရရှိနိုင်လို့ လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။
*** MYANHOUSE Local Made မှ ရောင်းချသော အရိုးနှင့် ပြုလုပ်သောပစ္စည်းများနှင့် အရိုးပန်းပုများအားလုံးသည် စွန့်ပစ် ကျွဲရိုး၊နွားရိုးများကိုသာ ကောက်ယူဆောင်း၍ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၀ယ်ယူစုဆောင်းရန်လည်းကောင်း၊ အဆောင်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်သော်လည်းကောင်း စိတ်ချလက်ချ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Again for this time, let us show our bone sculpture collection here at our Myanhouse. It is sort of hard work to curve thick and strong bone surface and also to get the feeling of tenderness of the details on it. Differently from other mediums, the original shape and structure of the bones is very important as it is the basic form of the sculpture. So please come visit to see our collection of bone sculptures in Burmese style of different sizes and shapes including Burmese chess here in Myanhouse.
*** All the bone works and sculptures sold here in MYANHOUSE Local Made are recycled from disposals and safe from any animal-abuse. So please feel relax to collect for your own, asaspecial amulet or asagift for loved ones.
Author Kyaw LinnPosted on March 31, 2019 March 31, 2019 Categories Bone Sculpture
Previous Previous post: Burmese Amber (Burmite)
Next Next post: ပုလင်းပန်းချီ (Bottle Painting)